भाषा हराएको देश 'फिजी' मा १४० वर्ष पछि यस्तो नेपालप्रेम भेटियो । उत्पेरणात्मक शिविर सहितको (फोटोफिचर) - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: १७ भाद्र २०७६, मंगलवार September 6, 2019
नेत्र पण्डित-असनेपालन्युज !फिजी ,शुभा । ३ सय ३३ वटा टापुहरुको देश भनेर चिनिने फिजीमा योग, ध्यान तथा उत्पेरणात्मक तथा विभिन्न जागरणका कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । फिजीको राजधानी शुभा तथा त्यस क्षेत्रमा रहेको सरस्वती कलेज तथा विभिन्न समुदायको वीच भएको शिविर भब्य रुपमा सम्पन्न भएको हो । योगी तथा सकारात्मक सोचका अभियन्ता आर्चाय राजन शर्माद्धारा सञ्चालित कार्यक्रममा विभिन्न क्रियाकलापहरु गरिएको थियो ।
फिजीको सरकार, त्यहाँ रहेको नेपाली, भारतिय तथा अन्य समुदायकोे निमन्त्रणमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको हो । जस अन्तर्गत फिजीको नान्दी,लोटोका सिगांटोला, सुभा, राकीराकी क्षेत्रहरुमा गरि ९ वटा शिविर सञ्चालन भएका थिए । जसवाट एक हजार भन्दा धेरै व्यक्तिहरु लाभन्वित भएका छन् ।
कार्यक्रमा विदेशी नेपाली,आदीवासीदेखि लिएर विभिन्न सम्प्रदायका मानिसहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रम निकै रोचक फलदायी रहेको र यसले योग जागारणको तरंग नै फैलाएको नेपाली फिजी समुदायको अध्यक्ष प्रदिप देवले बताउनु भयो ।
फिजी सरकारले उहाँलाई लामो समयदेखि सांस्कृतीक राजदुतको रुपमा नियुक्त गरि यस्तो गतिविधी सञ्चालनहरु गर्न थप प्रेरित गर्दै आईरहेको छ । उहाँले सरस्वती कलेज फिजीमा, फिजी स्थित सुवामा नाड्रेला स्कुल सिगांटोकामा, नरोरो शिवमन्दिर सिंगाटोकामा,विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भएको थियो ।
जहाँ सयौ औंका संख्यामा जम्मा भएका व्यक्तिहरुले योग, ध्यान, सकारात्मक सोचवाट लाभान्वित बनेका थिए । मानिसहरु तनाव, रोग र अन्यकुरावाट ग्रसित भैरहेको बेला वैदिक समाज, वेदभूमि नेपालवाट उत्पन्न भएको यस्ता ज्ञानउदय कार्यक्रमहरु थप विस्तार गर्नुपर्नेछ ।
हेलम्बुको पशुपति मिन्दरमा विशेष कार्यक्रम
यसैगरि नेपालीहरुको विशेष वस्तीको रुपमा चिनिएको फिजीको विशेष स्थान हेलम्बुको पशुपति मिन्दरमा पनि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । उक्त कार्यक्रमवाट नेपालीमात्र नभएर अन्य समुदाय पनि लाभन्वित बनेको नेपाली समुदाय महिला संघकी संयोजक सरिता लताले बताउनु भयो ।
त्यसै गरि ‘लोटोका’ स्थित सेवा आश्रममा पनि आर्चाय राजन शर्माले एक विशेष शिविर सञ्चालन गर्नु भएको थियो । उक्त शिविरमा गुजराती समुदायले लाभ लिएका थिए । उक्त कार्यक्रमलाई अघिल्लो साल दुई वर्षसम्मको लागि निरन्तरता दिईनु पर्नेमा उक्त समुदायले प्रस्ताव राख्नु भएको थियो ।
विश्व मानव जागरण अन्तर्गत विभिन्न देशमा यस्ता कार्यक्रमहरु आर्चाय शर्माले सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ । विश्व शान्ति तथा आध्यात्मक विज्ञान समाज जिपिएसएसको प्रमुख आयोजना तथा स्थानिय निकायहरुको सम्मन्वयनमा यस्ता कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका हुन् ।
यसैगरि विश्वभर ५ सय योगदुतहरु नियुक्ती गर्ने योजना अन्तर्गत २ घण्टा तालिम प्राप्त गरेका योगदुत नियुक्ती गरिन्छ । जसले गर्दा नेपाली योग, ध्यान,अध्यात्मक विश्वभरि प्रचार भैरहेको छ नै मानिसहरुको वीचमा सकारात्मक चिन्तन, आपसी भेदभावलाई अन्त गर्न प्रेरित हुने अभियान तथा सदभावको विकास भैरहेको पाइृन्छ । त्यस्तै यहि अष्गट महिनामा आर्चाय राजन शर्माले कतारको दोहा, लण्डनको रेडिङमा, स्पेनको बार्सिलोनामा,दुवईमा यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु भएको थियो ।१४० वर्ष देखि फिजीमा नेपालहरुको वसोबास हुंदै आएको छ । जहां नेपाली भाषा हराएको छ तर विश्वमा विरलै भेटिने नेपाली पन र प्रेम भने फिजिमा भेटिन्छ ” आचार्य राजन शर्मा’को भनाइ छ ।
अष्ट्रेलियाको तासमनिया राज्यमा योग तथा अध्यात्मिक गुरु आचार्य राजन शर्माको योग,ध्यान संग संगै जीवन उपयोगि प्रवचन।
महेश्वर शर्मा सिड्नी,अष्ट्रेलिया जीवनमा खुशि कसरि रहने? सधैँ खुशि रहने कला कसरि सिक्ने? हामीले पाएको […]
वैदिक दिनचर्या र वैज्ञानिक पक्ष – आचार्य राजन शर्मा (भिडियो)
राजन लोहनी ,कतार, दोहा। हाम्रो पूर्वीय संस्कार अनुसार हामीले कसरी दिनको शुरु गर्ने र कसरी अन्त गर्ने […]
नेत्र पण्डित अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलिया सरकारले हवाइ टिकट, बसोबासको खर्च, बीमा साथै सबै शैक्षिक शुल्क […]